Nụrụ Mgbe Naanị? Isi ụkwụ isii? | Martech Zone
Michael ezigara na blog na May, mgbe ọ gara CMS Ngosi, na Ibekuku bụ otu n'ime egwu dị n'ebe ahụ. Ibekuku? Kedu ihe bụ Ibekuku? Emechara m chọpụta…
Plone bụ otu n'elu 2% nke oru mmeghe niile n’uwa niile, tinyere 200 ndị mmepe na karịa 3Ndị na-enye azịza 00 na mba 57. Emebeala oru ngo a ebe ọ bụ na 2001, dị na n’ihe karịrị asụsụ iri anọ, ma nwee kasị mma nche track ndekọ nke isi CMS ọ bụla. Ọ bụ Plone Foundation, nzukọ 501 (c) (3) na-enweghị uru, nwekwaara ya maka sistemụ arụmọrụ niile.
Plone bụ nnukwu usoro njikwa ọdịnaya dị ike. Ewezuga usoro njikwa njikwa ọdịnaya niile, enwere ole na ole pụtara n'ezie:
Oke Scalability - ọ bụghị ihe ọhụrụ maka mmejuputa iwu Plone nwere ọtụtụ narị puku ma ọ bụ nde ibe. Nke a enweghị ezigbo njikwa na ọtụtụ sistemụ njikwa ọdịnaya.
Ntugharị na Nkwenye nke Omenala - enwere ike itinye usoro nhazi, nhazi na nkwado ihu ọma. Maka ndị ahịa ụlọ ọrụ, nke a dị oke ike.
Ọsọ na ịdị mfe - Plone dị oke ngwa ngwa na-eje ozi na ihu igwe na interface ahụ dị oke mfe ma nwee ike ịdị maka onye ọrụ ọ bụla.
Dika otutu oru ndi ozo mepere emepe, Plone adighi enwe obodo di egwu nke ndi mmepe na nbudata itinye ihe. E nwere ihe fọrọ nke nta 4,000 tinye-ons dị na ntanetị iji gbasaa ọrụ nke nrụnye gị - gụnyere ịde blọgụ, nkewa, arụmọrụ, mgbasa ozi mgbasa ozi na ngwaọrụ mmekọrịta.
Ka m na-ede ihe ntanetị, ọ nwere mgbe ụfọdụ enwere ụdị njikọ Indiana. Plone adịghị iche. Calvin Hendryx-Parker bụ onye otu ọgbakọ Plone ntọala ma ọ dị ebe a na Fortville, Indiana. Nwunye Calvin, Gabrielle Hendryx-Parker guzobere ụlọ ọrụ ahụ, isii ụkwụ elu, na 1999 na San Francisco na ha kwagara ụlọ ọrụ na-ahụ maka mba ụwa na Indiana. Gabrielle nwekwara MBA na Marketing na Leadership na EM Lyon, France.
M gara Isi ụkwụ isii ọnwa gara aga ma nwee obi ụtọ. Ulo oru ha ohuru ohuru na obodo Fortville bu ebe di egwu. Ọbụna ha nwere obere data data nke ha na ndị na-eweta nkwado ndabere na ntinye eriri iji soro ndị isi ahịa ha Datalọ Ọrụ Data Ndụ. Ha na-enye nnabata, mmepe omenala, ọrụ ntinye, ma wulite nrụpụta Plone maka ụlọ ọrụ na Life Sciences, Mmụta Kachasị elu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ n'ụwa niile.
Fekwụ isii guzobere n'oge na-adịbeghị anya gosipụtara SolrIndex 1.0, ngwaahịa maka Plone / Zope nke na-enye ike nchọta enwekwuru site na itinye ego Solr, ewu ewu usoro ihe eji emeghe ihe eji emeghe ihe site na oru Apache Lucene. SolrIndex na-eji ike na-enwu ọkụ na ngwa ngwa. SolrIndex nwere ikike inwetara site na imewe, nke putara na onwere ikike ijikota na ndeputa ya na ebe edepụtara ha. Nke a bụ ozi ọma maka saịtị dị mkpa iji nye ike ọchụchọ gafee ọtụtụ ebe nchekwa.
Fekwụ isii ugbu a nwere ihe karịrị ndị ọrụ 20 ma na-aga n'ihu na ndekọ ndekọ ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ kwa afọ kemgbe ịmalite. Ọ bụ ụtụ maka nka na nkwado ha na-enye ndị ahịa ha. Isii Upkwụ Upkwụ na-enyekwa Plone Tune-Up Day… kwa ọnwa, ụbọchị niile, ihe omume mebere maka inyere obodo Plone aka.
Tags: ịde blọgụCMSusoro njikwa ọdịnayausoro nlekọta ọdịnayannukwu cmsnkewamgbasa ozi gụghariaploneisii ụkwụ eluarụ ọrụ